मसिना कालिका मन्दिरलाई हेर्दा ... - Pradesh Today मसिना कालिका मन्दिरलाई हेर्दा ... - Pradesh Today
गुरुप्रसाद शर्मा रेग्मी
मसिना कालिका भगवतीको भौगोलिक र वातावरणीय परिस्थिति र अम्बिकेश्वरी भगवतीको मन्दिरको वातावरणीय परिस्थिति एक सम्मान भएकाले नै होला मसिनाकी कालिका भगवती र अम्बिकेश्वरी भगवतीलाई दिदी–बहिनी भन्ने नाता लगाइ दिएको किम्वदन्तीले आजसम्म नियमित पाइरहेको छ । यस्तो हुनुको वास्तविकता के हुनसक्छ भने अम्बिकेश्वरीमा सतीदेवीको कर्ण पतन भएकाले त्यो स्थानमा कानको प्वालको आकारमा रहेको एउटा प्वाललाई नै माता अम्बिकेश्वरीको रुपमा पूजाअर्चना गर्दै आएको देख्ने ज्येष्ठ नागरिकहरु आज पनि हुनुहुन्छ । यसैगरी मसिनामा स्थापित भएको कालिका मन्दिर कहिले स्थापित भयो ? कसले स्थापित ग¥यो ? भन्ने ऐतिहासिक महत्व देखिन गएकाले त्यो पुरानो मन्दिर भत्काई नयाँ शैलीमा नयाँ मन्दिर बनाउन रकम विनियोजन भएकाले सो मन्दिर भत्काउन लगाइयो । मन्दिर भत्काउन मन्दिरमा स्थापित कालिका भगवतीको मूर्ति अन्यत्र सार्नुपर्ने भयो । सो मूर्ति सादा त्यस मूर्तिको ठीक तल अम्बिकेश्वरीमा कर्ण पतन भएको प्वाल झै देखिन गयो । दुबै मन्दिर पुरातत्व विभागले भत्काई नयाँ रुपमा बनाउन लागेको अवस्था छ । दुबै स्थानको वातावरणीय परिस्थीतिको विवेचना गर्दा मसिना कालिका मन्दिरमा सतीदेवीको अर्को कुनै अंग पतन भएको सम्भावनाहरु देखा पर्दछन् । यस कुराको लागि पुरातत्व विभाग अनुसन्धानको लागि सचेत देखिन्छ । त्यो प्वाललाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेर मन्दिर भत्काउन लगाएको छ । यसैले होला यी दुई दिदी–बहिनीको रुपमा यी दुबै स्थानका भगवतीलाई भनेको हुने पर्ने बुझिन्छ । दाङ क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरता, पर्यावरणीय उच्चता, धार्मिक आस्था र निष्ठाकै कारण वन्न गएको धार्मिक पर्यटकीय स्थल हुन् गएको हो ।
अब स्थानीय जनताको स्थानीय भक्तहरुको दबावमूलक भावना, धारणा र मानसिकता बन्नु पर्दछ । यसो भएमा दाङका सबै मन्दिरहरु धार्मिक स्थलहहरुको चर्चा परिचर्चा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वातावारण बन्ने छ । यस कुरामा सबै दंगालीको ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ । एउटा पौराणिक सत्यतथ्यलाई पनि बिर्सन हुँदैन जस्तो लाग्छ ।
अम्बिकेश्वरी मन्दिरमा कर्ण पतन, छिल्लीकोटमा बायाँ करङ पतन, सुनकोट, सवारीकोटमा देवीहरुको प्रसिद्ध मन्दिरहरुको अवशेष मात्र देख्न पाइन्छ । रिहार, धारपानीमा विश्वकै अग्लो त्रिशुल भएको शिव मन्दिरको भगवती र स्वर्गद्वारी मन्दिरको बीचमा रहेको मसिनाको क्षेत्र अझ महत्वपूर्ण हुन गएको छ । किनभने स्वर्गद्वारी जस्तो स्वर्गधाम जाने बाटो यही मसिनाबाट नै भएको र स्वर्गद्वारी महाप्रभुको विशेष स्नेह रहेको कुरा मसिनामा नागेश्वर मन्दिर स्थापनाको समयमा घटेको अनेक घटना र त्यतिबेलाको चर्चा परिचर्चाले नै पुष्टि गर्दछ । यस सम्वन्धमा थप जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता नभएर जस्तो लाग्छ । निश्चय पनि मसिना भगवती प्रचार र प्रसारको अभाव र स्थानीय भक्तहरुको उच्च विचार नबन्नुका कारण ओझेलमा बस्नु परेको तीतो सत्य हो । यतिबेला दुबै मन्दिरको पुनःनिर्माण भैरहेको रिहार, सुनकोट, सवारीकोट, धारपानी, चौघेरा, अम्बिकेश्वरी मसिना, स्यूजा हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म जाने पर्यटकीय मार्ग बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यानकर्षण भएको छ । अब स्थानीय जनताको स्थानीय भक्तहरुको दबावमूलक भावना, धारणा र मानसिकता बन्नु पर्दछ । यसो भएमा दाङका सबै मन्दिरहरु धार्मिक स्थलहहरुको चर्चा परिचर्चा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वातावारण बन्ने छ । यस कुरामा सबै दंगालीको ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ । एउटा पौराणिक सत्यतथ्यलाई पनि बिर्सन हुँदैन जस्तो लाग्छ । स्कन्ध पुराणमा उल्लेख भएको कुरा के छ भने जहाँ–जहाँ सतीदेवीको अंगहरु पतन भएका छन् । त्यहाँ–त्यहाँ शिव लिङ्ग स्थापना भएको उल्लेख छ । अम्बिकेश्वरी, छिल्लीकोटमा सतीदेवीको अंग पतन भएको उल्लेख छ । तर शिव लिङ्ग स्थापना भएको दुबै स्थान देखिएको छैन् । दुबै स्थानमा शिव लिङ्गपछि स्थापना भएको भन्ने कुरा ज्येष्ठ नागरिकहरुबाट भनेको सुनिन्छ । पुराणमा उल्लेख भएको नपाईएता पनि मसिना सुकोटमा सरिकोटमा सतीको कुनै अंग पतन भएकाले अदृश्य रुपमा रहेका मसिनाका नागेश्वर महादेव र धारापानीका पाण्डवेश्वर महादेव र दाङ देउखुरीको देउखुरीतर्फको पहाडमा रहेको जलेश्वर महादेव स्थापित भएको हुनसक्ने कुरालाई नर्कान सकिदैन । यतिबेला पुरातत्व विभागले मसिना कालिका भगवती र अम्बिकेश्वरी भगवतीलाई नयाँ रंग रुपमा नयाँ उर्जा दिने जो सतप्रयास गरेको छ । त्यसको सह्राना गर्नैपर्ने हुन्छ । यो मन्दिरहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेपछि यी मन्दिरहरुको विकासले ठूलो फड्को मार्न सक्नेछ । यो दाङ क्षेत्र नै पूर्णरुपमा धार्मिक पर्यटकीय र पर्यावरणीय स्थल बन्ने छ । यिनै हाम्रा दाङको पहिचान बन्नेछन् र हामी दङ्गालीहरुलाई आत्मगौरव हुनेछ । जहाँसम्म आस्था र निष्ठाको कुरा छ । विश्वास र समर्पणको कुरा छ । त्यहाँ विश्वास मात्र हुन्छ, तर्क हुदैन् । तर्कमा धार्मिक विश्वसनीयता हुन सक्दैन । स्वर्गद्वारी जाने बाटो त्यही मसिना भएकाले भारतबाट आउने श्रद्धालु भक्तहरुसँग उनमा आएको आत्मबल र आत्मविश्वासको दिव्य उर्जा मसिनामा र स्वर्गद्वारीमा कसरी पाउनुहुन्छ ? तपाईहरु किन र केको लागि आउनु हुन्छ ? भनेर २५ जना भक्तहरुलाई सोध्दा सबैको एउटै जवाफ थियो । जीवन आईपरेका भौतिक, नैतिक कठिनाईहरु समस्याहरुबाट पीडित हुनुपरेको बेला आफ्नो दुःखेसो पोख्न र त्यसबाट निदान पाउन मसिना स्वर्गद्वारी आउँछौ ? जुन समस्या र पीडा लिएर मसिना स्वर्गद्वारी आउँछौ । ति सबै समाधान हुने भएकाले हामीहरु प्रत्येक वर्ष दुःख र सुखका कुरा लिएर आउने गर्दछौँ । आज पनि श्रद्धालु भक्तहरु आउनेक्रम जस्ताका तस्तै छ । यहाँका पनि विभिन्न जिल्लाबाट श्रद्धालु भक्तजनहरु आउने क्रमले नियमितता पाइरहेको छ । विशुद्ध मन लिएर देवी देवताका मन्दिरमा गएर आफ्नो दुःखेसो पोख्ने हो भने मन्दिरको शंख घण्ट मूर्तिको उर्जाले नयाँ आत्मबल र आत्मविश्वास बढाइदिन्छ । आत्मबल र आत्मविश्वास बढेको मानिसका कुनै पनि ईच्छा आकांक्षा अपूरो हुँदैन् । यो सत्यलाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन् ।